Hoggaamiyihii Mucaaradka Sudan Oo Xabsiga Loo Taxaabay Kaddib Kulankii Ra'iisal Wasaaraha Itoobiya - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaHoggaamiyihii Mucaaradka Sudan Oo Xabsiga Loo Taxaabay Kaddib Kulankii Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya
Khartoum (Jigjigaonline) – Siyaasi mucaarad ah oo ka mid ahaa hoggaamiyeyaasha rayidka mudaharaadka ka wada Sudan ayaa xabsiga loo taxaabay kaddib markii uu kulan la yeeshay Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya oo Jimcihii u tegay Khartoum inuu dhexdhexaadiyo milateriga ku-meelgaadhka ah ee xukunka haya iyo kooxaha kacdoonka.
Mohammad Esmat waxa uu ka mid ahaa madaxdii mucaaradka ee uu kulanka wada-hadalka ah la yeeshay Abiy Ahmed, hase yeeshee inyar kaddib ayey qabteen ciidamada ammaanka, waxaanay u taxaabeen jeelka sida laga soo xigtay xisbiga uu ka tirsan yahay.
Ma jiro war faahfaahsan oo ku saabsan xadhigiisa, hase yeeshee waxa uu Mohammad Esmat ka mid ahaa horjoogeyaasha mucaaradka ee wada-xaajoodka kula jiray dawladda, kuwaas oo Jimcihii ogolaaday inay milateriga miiska la fadhiistaan kaddib kulankii Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya.
Sida laga soo xigtay telefishanka Al Jazeera, mucaaradka Sudan ayaa si buuxda u aqbalay codsi uu ula tegay Abiy Ahmed oo ahaa inay ka qayb-galaan wada-hadal buuxa oo lagu soo afjaro xiisadda ka taagan dalkaas, laakiin waxay ku xidheen dhawr shuruudood oo ay ka mid yihiin in milaterigu ogolaadaan in baadhitaan caalami ah lagu sameeyo ciddii ka dambaysay dadkii Isniintii lagu laayey Khartoum, sidoo kalena sharciga la horkeeno kuwii bixiyey amarka.
Si kastaba ha ahaatee, Sudan ayaa ku jirta xaalada cakiran, iyadoo milaterigu isku sii dhejinayaan kursiga ay kala wareegeen Cumar Xasan Al Bashiir, halka shacabkuna doonayaan in xukunka lagu wareejiyo rayidka.
Waa tuma gabadha Trump ee bah goonida ah?